Home Wararka Gudaha Shanta arrimood uu Famaajo uga duwan yahay madaxweynayaasha kale
Farmaajo oo muddo dhan 5 sanno, 3 bilood iyo maalmo ka arriminayey dalka Soomaaliya wuxuu FaylashiI ugu muhiimsanaa ee ay dowladdiisa ka shaqeyneysay ku wareejiyey madaxweynaha cusub.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddada uu xilka hayey ma ahayn mas’uul sida madaxweynayaasha kale shir jaraa’id qabta si xaaladda dalka ka taagan shacabka ay ula socdaan.
Xasan Sheekh iyo taliyeyaashii uu ku yiri ‘dhiiqo ayaa lugaha la idiin galinayaa’
Wuxuuna Farmaajo uu shirka Jaraa’id uu ka door bidi jiray war muriteed iyo bayaanno qoraal ah oo uu xafiiskiisa soo saaro. Shirka jaraa’id waxaa inta badan qaban jiray xafiiska madaxweynaha u qaabilsan warfaafinta.
Muddada shanta sana ka badan uu Farmaajo xilka hayey marnaba ma dhicin inuu shir jaraa’id uu qabto oo ay warbaahintu su’aalo weydiiyaan. Arrintaas oo ka mid ah waxyaabaha madaxweynayaasha kale uu kaga duwan yahay.
Jinsiyadda Mareykanka uu celiyey
Previous articleHub Culus: Imisa waddan ayaa heysata hubka niyukliyeerka, meeqa xabo ayaase taalla adduunka?
Next articlelaamaha Amniga Soomaaliya oo baadi goobaya maleeshiyaad dilal geystay